Doorashooyinka Uk 2017: Labourka & Muxaafidka oo aad isugu dhow – Kasmo Newspaper
Doorashooyinka Uk 2017: Labourka & Muxaafidka oo aad isugu dhow
Updated - June 1, 2017 5:06 pm GMT
London (Kasmo), Iyada oo Doorashooyinkii Guud ee 8da Juun 1 toddobaad oo qur ah naga xigo, xisbiga Labourka ayaa u muuqanaya mid xagga dhibcaha ku soo dhowaanaya xisbiga Muxaafidka.
Bilowgii ololaha, 2 bilood ka hor, R/Wasaare Theresa May waxay saadaasha ku hoggaminaysay in ka badan 20 dhibcood, laakiin dooddii 31kii dhexmartay madaxda 7da xisbi ee dalka ugu weyn iyada ayaa ka maqnayd.
May waxay ku andacootay in ay mar hore, toddobaadkiiba 1 mar, sannad idil hor fadhiday Jeremy Corbyn, doodda Arbacada ee Barlamaanka, sidaa darteedna an loo baahnayn iska horimaad kale. Laakiin lafagurayaasha iyo qaar ka mid ah ra’yiga dadweynaha ayaa shaki ka qaba in sababtu wax kale tahay: cabsi ay ka qabto in looga guulaysto doodda tooska ah ee Tv-ga.
Waana mid ka mid ah sababaha olole soo bilowday 2 bilood ka hor oo R/Wasaaruhu ku horreysay 20 dhibcood ay hadda u soo hartay oo qur ah 3 dhibcood. Marka la tixgaliyo khalad kasta oo saadaasha ka dhaca, Corbyn wuxuu maalmihii la soo dhaafay gaaray guulo fara badan.
Bil ka hor wuxuu ka dambeeyay May 16 dhibcood, 15 cisho ka horna 9, Axaddii la soo dhaafayna 6, imminkana wuxuuba filayaa in uu ka hormari doono 8da Juun, maalinta codbixinta. Xitaa barbar-dhac ama jab si kooban ah waxay hoggaamiyaha Labourka u noqon kartaa guul xagga niyadda ah, waayoo bilowgii hore waxaa loo wada haystay mid an rajaba lahayn.
Haddii sidaasi dhacdana Muxaafidku waxay ku guulaysan karaan aqlabiyad yar oo an ahayn middii looga baahnaa in ay kaligood taliyaan, Labourkuna waxay heli karaan fursad ay xukuumad wadaag ah kula soo dhisaan xisbiyada Lib-Dem, Greens, SNP iyo North Ireland.
Go’aanka doorasho in la galo waxaa lahayd Theresa May qudheeda, iyada oo raadinaysa aqlabiyad ay uga horjoogsato xisbiyada kale in ay ka carqaladeeyaan wada-xaajoodka Brexit, ka bixitaanka Midowga Yurub oo noqday udub-dhexaadka ololaha doorashada.
Haddiise ay ku guulaysan weydo in ay kordhiso tirada aqlabiyadda ay hadda haysato (15 xildhibaan) waxay qiran doontaa in ay khalad taktikada ah gashay, dadka qaar ayaana qaba in ay ku khasbanaan doonto in ay xilka iska casisho.
Hoggaamiyaha Labourka Jeremy Corbyn ayaa isagu u muuqanaya mid xasilloon, kalsooni buuxdana isku qaba, waxaase la kala bixi doonaa toddobaadka dambe, maanta oo kale.